Reverse logistics ဆိုတာဘာလဲ ? ဘယ်လို ပုံစံ လည်ပတ် ဆောင်ရွက်သလဲ ? | Super Light Logistics
Reverse logistics ဆိုတာဘာလဲ ? ဘယ်လို ပုံစံ လည်ပတ် ဆောင်ရွက်သလဲ ?
👉 Reverse logistics ဆိုတာဘာလဲ ?
👉 ဘယ်လို ပုံစံ လည်ပတ် ဆောင်ရွက်သလဲ ?
✅ Reverse logistics (နောက်ကြောင်းပြန်ကုန်စည်စီးဆင်းမှု) ဆိုသည်မှာ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားပစ္စည်းများ ပြန်လည်အသုံးပြုရေးနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အားလုံးကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် Reverse logistics ဆိုသည်မှာ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို တန်ဖိုးရနိုင်သမျှ ပြန်လည်ဆယ်ယူနိုင်ရေး (သို့မဟုတ်) သင့်လျော်သလိုဖျက်သိမ်းနိုင်ရေး ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ၎င်းတို့၏ထုံးတမ်းစဉ်လာ နောက်ဆုံးရောက်ရှိရာဒေသများ (လက်လီ၊ လက်ကားအရောင်းဆိုင်များနှင့် သုံးစွဲသူများ) မှ ဖြန့်ချိသူ (သို့မဟုတ်) ထုတ်လုပ်သူထံသို့ နောက်ကြောင်းပြန်ပို့ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ပင်ဖြစ်သည်။
✅ Reverse logistics ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများကို မူလထုတ်ကုန် အရည်အသွေးအတိုင်း ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း (Re manufacturing) နှင့် အရည်အသွေးမမှီသည့်ပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများကို ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း (Refurbishing) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ အကျုံးဝင်ပါရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ Reverse logistics ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပိုလျှံပစ္စည်းများနှင့် ငှါးရမ်းထားရာမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောစက်ပစ္စည်းများ၊ အသုံးအဆောင်ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို ရောင်းချခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များသည်လည်း အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် logistics (ကုန်စည်စီးဆင်းမှု) သည် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲသူများထံသို့ ရှေးရှုသည့်ပို့ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
✅ Re verse logistics (နောက်ကြောင်းပြန်ကုန်စည်စီးဆင်းမှု) တွင်မှု ကုန်စည်ပစ္စည်းများသည် သုံးစွဲသူများထံမှ ဖြန့်ချိသူ (သို့မဟုတ်) ထုတ်လုပ်သူထံသို့ ပြန်လည်ရွေ့လျားပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Reverse logistics ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြရမည်ဆိုပါက ပုံမှန်ကုန်စည်စီးဆင်းမှု (Logistics) အရ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကို သုံးစွဲသူ (သို့မဟုတ်) လက်လီ၊ လက်ကားအရောင်းဆိုင်များသို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီးသည့်နောက် ထပ်မံဆောင်ရွက်ရသည့် မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ် (သို့မဟုတ်) စီမံခန့်ခွဲမှုမဆို Reverse logistics နှင့်အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်များသာဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် Supply chain ကွန်ယက်တစ်လျောက် သုံးစွဲသူ (သို့မဟုတ်) ဖြန့်ချိသူ လက်လီ၊ လက်ကားအရောင်းဆိုင်များသို့ ရောက်ရှိသည်အထိ စီးဆင်းသွားမြဲဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သုံးစွဲသူထံရောက်ရှိသည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသည် အရည်အသွေးမမီ (သို့မဟုတ်) အပြစ်အနာအဆာမကင်း ချွတ်ယွင်းမှုရှိပါက သုံးစွဲသူမှ အဆိုပါပစ္စည်းကို ပြန်လည်ပေးပို့လာမည်ဖြစ်သည်။
✅ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် ပြန်လည်အပ်နှံလာမည့်အရည်အသွေးမမှီသည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်သယ်ယူခြင်း၊ ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း (သို့မဟုတ်) ဖျက်ဆီးခြင်းပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အရည်အသွေးမမှီသည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းမှ အသုံးပြုနိုင်သမျှ ပြန်လည်ဆယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် Supply chain ကွန်ယက်တစ်လျောက် ကုန်ပစ္စည်းများ နောက်ကြောင်းပြန်စီးဆင်းခြင်းသည် Reverse logistics ပင်ဖြစ်သည်။
✅ Reverse logistics သည် အရည်အသွေးမမှီသည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်သယ်ယူရေး စီမံခန့်ခွဲမှုမျှသာမဟုတ် ၎င်းထက်များစွာပိုလွန်သည်။ Reverse logistics သည် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ အရည်အသွေးမမှီ၍ ပြန်လည်သယ်ယူရခြင်းမျိုးမှ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေး၊ အလဟဿလေလွင့်ပြုန်းတီးမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲထိန်းသိမ်းနိုင်ရေး၊ မလိုအပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကို စနစ်တကျဖျက်ဆီးရေးစသည့် လုပ်ငန်းရပ်များနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များပင်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် Reverse logistics သည် အရည်အသွေးမမှီ၍ ပြန်လည်သယ်ယူလာရသည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများမှ ရနိုင်သမျှတန်ဖိုးကို ပြန်လည်သယိယူရန်မျှသာမဟုတ်ပဲ ထိုသို့ပြန်လည်အပ်နှံလာရခြင်းမျိုး (သို့မဟုတ်) အရည်အသွေးမမှီ၊ အပြစ်အနာအဆာမကင်းသည့် ထုတ်ကုန်မျိုးမဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စုစည်းပေါင်းစပ်မှု ပေါ်ထွန်းစေနိုင်သည့် အကျိုးကိုရရှိစေနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။
#SuperLight #Logistics #Educating
Super Light Logistics 13th Anniversary & Annual Staff Party
Super Light Logistics ရဲ့ ပြီးပြည့်စုံသော Transportation ဝန်ဆောင်မှု
Super Light Logistics ရဲ့ ပြီးပြည့်စုံသော ဝန်ဆောင်မှု